L'Atelier K. - Le Cube - I-Airbnb
Blois, Centre-Val de Loire, i-France
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-L'Atelier K - Lofts À Louer
U-L'Atelier K - Lofts À Louer Ungumbungazi ovelele
I-Loft ethandekayo, induduzo yesimanje futhi egcwele.
Indawo yokusebenzela yangaphambili ilungiswe ngesitayela samanje. I-loft itholakala enkabeni yomlando yedolobha laseBlois, ebheke igceke elizolile nelikhanyayo. Inqaba yaseBlois ibonakala egcekeni.
Ukufinyelela endaweni yokuphumula " Espace détente " (ichibi lasendlini ne-jacuzzi) ngesizini yasehlobo.
I-COVID 19 : bona ulwazi mayelana nendawo yokuhlala
Amakamelo esimanjemanje futhi avulekile, anentofontofo egcwele, ukushisisa kwamathayela, i-TV, i-Wifi, ikhofi netiye.
Ukuze siqinisekise ukwamukela kwakho ngaphansi kwezimo ezihamba phambili, senze izenzo ezithile ngokuvumelana neseluleko sezempilo :
. Ngemuva kokuhlanza okujwayelekile okujwayelekile, khipha amagciwane kuzo zonke izindawo
. I-gîte igcinwa ingenalutho okungenani amahora angama-24 isikhathi ngasinye lapho abaqashi beshintsha
. Ukufika nokuhamba "Okungaxhunywanga": okhiye bafakwa ebhokisini elingukhiye elinamakhodi
. Sikwazisa ngocingo, noma ngokukwamukela ngokoqobo ngokwesicelo sakho kuyilapho sihlonipha ukuthinta "okuvinjiwe" (imaski, ibanga lokuphepha ...)
. Izinsiza eziseduze: ikhemisi eliqhele ngamamitha angama-50, odokotela abaningi abajwayelekile edolobheni, isibhedlela saseBlois imizuzu eyi-10 ngemoto.
. Indawo yokuphumula: enkonzweni enemithetho ethile yokusetshenziswa. Ukubulala amagciwane njalo kusihlwa.
"Le Cube" inamakamelo amabili amakhulu:
. Igumbi elikhulu elinekhishi elisha elihlome ngokuphelele (umshini wokuwasha izitsha, ihhavini ye-microwave ehlanganisiwe, ifriji, i-induction hob ne-extractor, umshini wekhofi we-Nespresso neketela). Ekamelweni elifanayo : igumbi lokuhlala elinemibhede emi-3 eguqulekayo engu-90x190, ngokwesibonelo, izingane ezilalayo. Yonke imibhede ifakwe omatilasi be-memory foam.
. Igumbi lokulala elikhulu elinombhede wenkumbulo wekhwalithi ephezulu engu-160x200. Ekamelweni elifanayo, kunendawo yokugeza enosinki, ishawa enkulu, indawo yokomisa izinwele namathawula
. Indlu yangasese ehlukene, ukufinyelela ekamelweni.
Uma uza nomntwana, "i-Le Cube" inombhede wengane kanye nesihlalo somntwana uma iceliwe.
I-L'Atelier K. - I-Le Cube ilungele umbhangqwana ofuna indawo ethokomele neyothando, noma umndeni onabantwana.
Egcekeni elizimele, "i-Le Cube" inetafula elinezihlalo.
ubusuku obungu-7 e- Blois
4.91 · 122 okushiwo abanye
Indawo ephakathi komfula i-la Loire kanye ne-Castle, ivakashelwa kakhulu, inothile ngezindawo zokudlela, izindawo zokuphuza, izindawo zemibukiso yezobuciko nemisebenzi yezandla yendawo. Enkabeni yomlando yedolobha, eduze ne-Loire kanye nokujikijela kwetshe ukusuka e-Castle, esontweni lase-Saint Nicolas, kanye "ne-la maison de la magie".
Kulula ukuthola ukudla nezinsiza ngezinyawo:
Ibhikawozi engamamitha angama-50.
Izimakethe ezincane ezi-3 phakathi nemizuzu emi-5 yokuhamba.
Imakethe yasendaweni yangaphandle ngoMgqibelo ekuseni, imizuzu emi-2 ukuhamba.
Ibungazwe ngu-L'Atelier K - Lofts À Louer
Sizojabula ukwabelana nawe isikhashana ngesikhathi sekhefu lekhofi. Singakweluleka ngamakheli angcono kakhulu e-Blois, izinqaba nezivini zase-Loire Valley. Sineziqondiso ezithile, amamephu ezivakashi kanye nemibono yokungcebeleka nokubuka indawo.
Sizojabula ukwabelana nawe isikhashana ngesikhathi sekhefu lekhofi. Singakweluleka ngamakheli angcono kakhulu e-Blois, izinqaba nezivini zase-Loire Valley. Sineziqondiso ezithile,…
UL'Atelier K - Lofts À Louer Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Blois namaphethelo